Xoriyadda, ka soo dejiso fiidiyowyo iyo muusig dheeri ah youtube-ka MP4 ama MP3 | War gadget
YouTube Waxay noqotay waqti ka dib mid ka mid ah adeegyada ugu caansan Google iyo meel ay adeegsadayaal badani ku raaxaystaan ​​daraasiin fiidyowyo ah maalin kasta mararka qaarkoodna nasasho la'aan. Laga soo bilaabo muusikada, ilaa cutubyada taxanaheena ugu xiisaha badan, iyada oo loo marayo hal-ku-dhigyada ugu qosolka badan iyo xitaa fiidiyowyada qaar ka mid ah kuwa ugu caansan adduunka, waa qaar ka mid ah waxyaabaha aan arki karno, laakiin nasiib darro ma badbaadinno, uguyaraan qaab rasmi ah tan iyo intaan ku guuleysaneyno waxaan haynaa qalab dhinac saddexaad ah sida Xoriyadda
Waana in YouTube uusan u oggolaan si toos ah inuu badbaadiyo fiidiyowyada lagu martigaliyo barnaamijyadooda. Si kastaba ha noqotee, maanta waxaa jira dhowr nooc oo awood ah kala soo bixi fiidiyow YouTube-ka kombiyuutarkayaga, kiniin ama taleefan casriyeysan qaab fudud, dhib la'aan iyo hab cadaalad ku dhisan.
1 Sida loo soo dejisto fiidiyowyo YouTube dheer leh OffLiberty
2 Ku soo dejiso fiidiyowyada EaseUS MobiMover Free
2.1 Ku dejiso fiidiyowyada 2 talaabo oo kaliya
Sida loo soo dejisto fiidiyowyo YouTube dheer leh Xoriyadda
Xoriyadda waa magaca aaladda aan dooneyno in aan maanta kaala hadalno iyo mida aan la soo qaadanayo waxaan kala soo bixi karnaa fiidiyowyada YouTube qaab FLV ama MP3 ah, iyada oo aan loo baahnayn in lagu rakibo wax barnaamij ah kombiyuutarkayaga. Qalabkani wuxuu leeyahay faa iidada weyn ee aan wax walba uga maamuli karno webka.
Marka ugu horeysa waa inaan helnaa OffLiberty, halkaas oo aan ku arki karno wax la mid ah, oo ay weheliyaan tiro badan oo daabacayaal ah, waxa ka muuqda sawirka soo socda;
Hadda iyo inaan soo dejino fiidiyoo kasta waa inaan gal URL isku mid ah, inkasta oo xaaladaha badankood tani aysan inta badan bixinaynin natiijooyinkii loogu talagalay. Si tan loo sameeyo, waxaa ugu wanaagsan in la qaato cinwaanka aan ka helno fiidiyow kasta si aan u wadaagi karno, kaasoo ku yaal meel ka hooseysa sharraxaadda oo ku xigta xulashooyinka "Embed" iyo "Email". Haddii ay dhacdo inaadan aqoon meesha aad ka heli karto URL-kan sawirka soo socda waan si faahfaahsan kuugu sharxeynaa adiga (waxaad arki kartaa tillaabooyinka la raacayo ee lagu qaabeeyey casaanka);
Isla marka aan helno cinwaanka la soo guuriyay waa inaan u geynaa OffLiberty iyo riix batoonka dansan. Nidaamka soo dejintu wuxuu bilaaban doonaa isla marka aan riixno badhankaas oo waxaan arki doonnaa wax sidaas oo kale ah.
Xulashada koowaad waa codka fiidiyowga oo si deg deg ah u soo dejisan doona tan labaadna waa fiidiyowga oo dhameystiran oo muddo dheer qaadan doona Haddii fiidiyowgu uu hal saac dheer yahay, ha quusan maxaa yeelay waxay qaadan doontaa waqti dheer inaad soo dejiso gebi ahaanba.
Sidaan horeyba kuugu sheegnay iyadoo kuxiran dhererka fiidiyowga waa inaan sugnaa inbadan ama kayar, laakiin xaaladaha badankood dhowr ilbiriqsi ama ugu badnaan daqiiqad ayaan heli doonnaa fiidiyowga aan dooneyno inaan soo dejino. Marka hawsha soo dejinta ay dhammaato waxaan arki doonaa wax la mid ah kan ka muuqda sawirka soo socda;
Si loo dhammeeyo habka loo soo dejiyo fiidiyow kasta oo YouTube ah iyada oo loo marayo OffLiberty waa inaan doorannaa qaabka aan dooneyno, MP3 si aan u soo dejino kaliya codka ama Video si aan u soo dejino fiidiyowga oo ay ku jiraan codka. Waxay kuxirantahay galka aad ku xirtay soo degsashada biraawsarkaaga, feylku wuxuu tagi doonaa hal meel ama mid kale.
Shaki la’aan fursadaha OffLiberty na siiso waa kuwo aad u xiiso badan Waana inaan dhowr jeer aan dooneynay inaan soo dejino fiidiyow YouTube ah si aan u awoodno inaan weligood badbaadinno. Intaas waxaa sii dheer, kiiskeyga, waxaan u isticmaalay aaladdan waqtiyo aan la tirin karin si aan u soo dejiyo heesaha si aan uga dhagaysto kumbuyuutarkayga, in kasta oo aan ka sarreeyo waxaan u isticmaalay inaan ku badbaadiyo heesaha nool ama riwaayadaha dhammaystiran ee dad badani ku duubaan taleefannadooda gacanta ka dibna telefoonka soo dhiga adeegga. Google.
Dabcan, qofna yuusan rumaysan in tani ay tahay habka kaliya ee looga soo dejisan karo fiidiyowyada ama faylasha maqalka ah YouTube-ka, maaddaama ay jiraan tobanaan kale, in kastoo laga yaabee inay tani tahay habka ugu wanaagsan ee fiidiyow looga soo dejisan karo adeegga Google. Haddii aad rabto inaad ogaato waxyaabaha kale ee lagu beddeli karo, ha moogaanin kuweenna hage si aad u soo dejiso fiidiyowyada YouTube qalab kasta.
Weligaa ma isticmaashay OffLyberty inaad soo dejiso fiidiyowyada YouTube-ka dheer?. Hadday jawaabtu haa tahay, noo sheeg khibradaada qalabkan. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaad noo sheegto adeegyada kale ama qalabka kale ee aad u isticmaasho inaad kala soo baxdo fiidiyowyada YouTube-ka. Waxaad noogu sheegi kartaa booska loogu talagalay faallooyinka qoraalkan ama shabakadaha bulshada ee aan joogno midkood.
Ku soo dejiso fiidiyowyada EaseUS MobiMover Free
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh si aad ugu soo dejiso fiidiyowyada qalab kasta iyo meel kasta oo aad joogtid waa inaad isticmaasho EaseUS MobiMover Free, oo awood badan free video downloader in aad u isticmaali karto labada Windows iyo Mac oo aad kala soo bixi karto oo aad ku wareejin karto fiidiyowyada si fudud oo habboon.
Ku dejiso fiidiyowyada 2 talaabo oo kaliya
Talaabada 1: Guji liiska Video Downloader baarka tabka iyo dooro qalabka aad rabto inaad kala soo baxdo fiidiyowyada.
2 Tallaabo: Gali cinwaanka fiidiyowga waxaad dooneysaa inaad soo dejiso oo aad gujiso badhanka soo dejinta. Markaad gujiso batoonkaas, softiweerku wuxuu bilaabi doonaa soo dejinta fiidiyowga aad tilmaamtay wuxuuna u wareejinayaa aaladda aad dooratay, ha noqoto taleefankaaga casriga ah, kaniiniga ama isla kombiyuutarka aad isticmaaleyso.
Haddii aad ogtahay ikhtiyaarro badan oo aad ku soo dejiso fiidiyowyada YouTube-ka, noo dhaaf faallo xulashadaada aad doorbideyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » OffLiberty, ka soo dejiso fiidiyowyo dhaadheer youtube
Xoriyad la'aan ma tahay?
Iima shaqeyso aniga offlberty maxaan ku sameyn karaa qosol
waa bilaash ???
Ku jawaab aldana
Mar dambe ma shaqeyso, ma bixin doontaa?
Laakiin mar dambe ma shaqeyso
MA SHAQEEYSO INTII KA HOREYSAY SIDII HORE ... WAXAY QAADATAA MUDDO DHEER
runti mar dambe ma shaqeyso, maxaa dhacay?
mar dambe ma furi doono bogga
Mar dambe ma shaqeyso
Way kari karaan
Maxaa ku dhaca fiss
Aad ayey u wanaagsan tahay, waxaan rajeyneynaa inaad sii cusbooneysiineyso, mahadsanid
Ku jawaab luis h lopez
Edin Zuñiga… Waad ku mahadsantahay sida cajiibka ah qalabka soo dejinta fiidiyowga
Jawaab Edin Zuñiga
Waxaan hayaa iPhone 6 .. Ma garanayo halka ay ku keydsan yihiin heesaha la soo dejiyey
Soo dejiso maareeyaha faylka oo halkaas ayaad ka heli doontaa
Ami ase time k ma soo bixi doono dabacsanaanta aad siiso waxayna dib ugu noqotaa inay noqoto xoriyad sidii bilowgii laakiin kuma qabato inay miyuusigga iga soo degsato, ma jiraa qof og haddii ay dhacday?
Waad salaaman tihiin, galab wanaagsan, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sababta uusan boggu iigu oggolaanayn inaan soo dejiyo hees kasta, waxaan nuqul ka sameeyaa url iguna oggolaan maayo inaan soo dejiyo, waxay dhahdaa isku day mar kale mana istaagto, sidan ayaan ahaa dhowr maalmood.
Waxay ila tahay in YouTube ay sameysay isbadal dhanka amaanka ah, iyo waliba nashqadeyn ah, isla markaana ay kuxiratay qaar kamid ah websaydhada soo dejista waxyaabaha ay ka kooban yihiin, oo ay ku jiraan Offliberty
HI AYAAN AHAY
SU'AASHA WAA LINK XQ OO AAN LAGU SOO DAGI KARIN MUUQAALO BADAN OO AAN LAHAYN XAFIISKA
WAXAY Iila muuqataa BARNAAMIJKA SUPER, LAAKIIN WAXAAN QAATAY TODDOBAADO KOOXOOD AH MARKII AAN IGA HELI KARIN HEESO AMA MUUQAALO. WAAN IDIN IDIIN LAHAYN INAAD FADLAN XAL isii.
Barnaamijku isbuucyo badan iima uusan shaqeeyn maxaad uga jawaabi weyday faallooyinka?
Kani waa iimaylka adeegga farsamada ee OffLiberty: contact@offliberty.com
Waxaan nahay degel macluumaad iyo cashar bixin ah, wax shaqo ah kuma lihin shirkadda maamusha websaydhkaas.
Haddii barnaamijku wanaagsan yahay laakiin ay jiraan maalmo aanan soo dajin karin muusigga, maxaa sabab ah, aad baad u mahadsan tahay
waxa ku saabsan xorriyadda - hadda ma sii shaqeyneyso….
Ka warran barnaamijka, mar dambe iima oggola inaan wax soo dejiyo. qof ayaa garanaya hab kale oo looga soo dejisan karo mixcloud
fiid wanaagsan ;
Walaacdaydu waa tan soo socota, maxaa dhaca dalabku ma shaqeyn muddo laba toddobaad ah iyo inaan arko sababta maxaa yeelay waxay umuuqataa inay aad ufiican tahay in la arko xalka, aad ayaad u mahadsantahay
Jawaab ku bixi leidys montero chacon
Caawi bogga ma shaqeynayo waana wax weyn inaan u baahanahay caawimaad ...
Waxay ahayd dhowr toddobaad tan iyo markii ay ii oggolaatay inaan soo dejiyo muusig ama fiidiyowyo, tani waxay sii wadi doontaa inay sii wado fadlan. Jawaab
Waad salaaman tahay, magaceygu ​​waa Yamila, ma dajin karo muusikada, maxaa dhacaya maxaa yeelay ma dajin karo muusikada
Ku jawaab Erica yamila
Exlente waa mid dhakhso badan
galab wanaagsan waxaan rabaa in aan ogaado waxa ku dhacay barnaamijkaan wax jawaab ahna kama bixinayo haba yaraatee ma jirto qaab lagu soo dejisto muusig barnaamijkan ayaa ugu fiicnaa taariikhda ilaa hada iga caawi jawaabta jawaab thanks
Ku jawaab Henry Quezada
Bogga dhaafa ma shaqeeyo
Miyuusan sii dejisan karin muusigga?
Waxaan rajeynayaa inaad wax ka qaban kartid arrinta ... waxay yaqaanaan bog kale si ay u soo dejiyaan muusikada
Waxay ahayd barnaamij heer sare ah, laakiin ku dhowaad sanad ka hor ayay joojisay wax walba oo ay soo degsatay. Ceeb dhab ah, maxaa yeelay waxay ahayd tan ugu wanaagsan ee jirtay xagga barnaamijyada soo dejinta.
Thanks to nolosha iyo xoriyad la'aanta oo wax walba isiisay.
Jawaab Nicasio Sanoja Palma
Waxaan isticmaalaa barnaamijkan, laakiin mararka qaarkood waxaan dhigayaa cinwaanka muusikada qaarkood waxayna ii sheegaysaa in urlku si ku meelgaar ah u shaqeynayo: Waxaan rabaa inaan kala soo baxo heesaha duubista abora ama qeybaha kor u qaadista oo keliya. Mararka qaarkood waxay kugu qaadataa tube dhowr maalmood si aad u geliso fiidiyowyada iyo bogag kale kan ayaa marka hore ah, laakiin waxaan ku qabaa dhibaatadaas xorriyadda.
Sony waxay kordhisaa qiimaha PlayStation Plus bulshadana way ka xanaaqsan tahay
Twitter wali kor uma qaadin madaxiisa